Ukudibanisa isenzi sesiFrentshi "Rentrer" (ukubuyela)
Funda indlela yokudibanisa "Rentrer" (Ukubuyela) ngesiFrentshi
Isifundo Esikhawulezileyo ekudibaniseni isenzi sesiFrentshi esisetyenziswayo
Isenzi sesiFrentshi sithetha "ukubuyela." Igama elilula kunokuba likhumbule, musa ukulidideka ngokuthi "ukurenta," isenzi isenzi . Abafundi baseFransi baya kuvuyisa ukwazi ukuba i- rentrer isenzi-senzi-qho, esenza ukuba ukukhumbula izilungelelaniso kube lula.
Esi sifundo siya kukubonisa indlela yokuqhelanisa isenzi esiluncedo kwizinto eziqhelekileyo, ezidlulileyo kunye nexesha elizayo.
Indlela yokudibanisa i-Rentrer
Izenzi zesiFrentshi kufuneka zidibaniswe ukuze zifanise ixesha kunye nesifundo sesihloko sakho.
Kanye njengoko songeza-kunye kunye nokuphela kwezivumelwano zesenzi zesiNgesi, kufuneka sitshintshe ukuphela kwezenzi zesiFrentshi njengoko sisuka kwinye ixesha ukuya kwelinye. Iindaba ezilungileyo kukuba i- rentrer isenzi-isenzi-rhoqo, isiqhelo esivame kakhulu sokuqhawula isiFrentshi.
Ukusebenzisa le tstshana, unokwazi ukufunda iimbambano ezisisiseko ze- rentrer kwaye uzibophezele kwimemori. Ezi zifomathi zengqondo ezibonakalisa kwaye uya kudibanisa isichazi sesifundo ngexesha elifanelekileyo ukuze ugcwalise isigwebo. Ngokomzekelo, "ndiya kubuya" ngethuba langoku ndiyaphinda kwaye ndingazange ndifeze , "sibuyele" siyi- rentrions .
Ukusebenzisa la magama kumxholo usebenzisa izivakalisi ezimfutshane kunokukunceda ukuzikhumbula ngekhanda.
irenti irente irente rentrais
irente irente irente rentrais
irenti irente yerenti
iikhredithi baqeshwe iirejri
urenti irente rentriez
yokurenta i-rentreront irente
I-Rentrer kunye neNxaxheba yeNxaxheba
Umntu okhoyo njengamanje we- rentrer urenti .
Oku kubunjwa ngokufaka-kwisenzi isitshi shendi . Ngaphandle kwesenzi isenzo, singasetyenziselwa njengesigqibo, i-gerund, okanye isibizo kwiimeko ezithile.
Rentrer kwixesha elidlulileyo
I- passé compé enye yeendlela eziqhelekileyo zokubonisa izenzi ngexesha elidlulileyo kwaye ungayisebenzisa kaninzi kunokungafezekanga.
Ukwenza lo mboniso omfutshane, uzakufuna isenzi esincedisayo kunye nesenzi isenzo esidlulileyo sithatha inxaxheba kwirejista .
Ulwakhiwo luhlangana ngokukhawuleza. Ngokomzekelo, "ndabuya" ngingu-rentré kwaye "sabuya" sisuke siqeshwe . Phawula indlela ukudibanisa oku kusetyenziselwa apha ngokwenene kukho ixesha langoku. Kungenxa yokuba iqela elidlulileyo libonisa ukuba isenzo senzeka ngaphambili.
Ukugqithiswa okungakumbi kweRitererrer
Phakathi kwezinye iziganeko eziqhelekileyo ze- rentrer ukuba unokufuna ukwazi ukuba isenzo sesigxina kunye nesimo sengqondo somlomo . Ngamnye kwezi zinto kunika ukungaqiniseki kwisenzo sokubuya.
Isetyenziswe ngethuba elincinci, yinto efanelekileyo yokukwazi ukubona i-passé elula kunye neefom ezingaphelelanga . Ezi zisetyenziswa ngokusisiseko kwisiFrentshi esisemthethweni, ngakumbi kwiincwadi.
irenti irente rentra irente
irente irente irenti zokuqeshisa
irenti irente rentra irenti
iirejri iirejista rentrâmes zokuqeshisa
rentriez irentiriez rentrâtes rentrassiez
yokurenta irenti irenti ukukrazula
Isimo somenzi osisigxina sisetyenziselwa imiyalelo emfutshane, ngqo kunye nezicelo. Xa uyisebenzisa, weqa isibhengezo sesifundo: kunokuba uhlawule , yenza kube lula ukuhlawula .
Funda Indlela Yokuthetha Ngomsebenzi Wakho ngesiFrentshi
Ixesha lokusebenzisa Ixesha leTshayina: 不好意思 Bù Hǎo Yì Si
Isigama Isifundo: IsiFrentshi kubahambi
Amagama okuQala eJamani kunye neeNguqulelo zawo
Umsebenzi - Ukusebenza
Iikhosi zamaFrentshi zeFree Online
Inkcazo yoMthetho kaDalton
I-Whaling Industry Ivelisa iOyile, Amakhandlela kunye nezixhobo zendlu
I-Stencils Collection: I-Stencils ye-Flower
I-Metropolitan College yase-New York Admissions